हेर्नुहोस आजको राशिफल : कुन राशिका लागि आजको दिन शु’भ ? – Khabarhouse
Khabar house | ७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०१:४८ | Comments
ज्योतिषि डिपि भण्डारी : वि.सं. २०७७ साल फागुन ०७ गते। शुक्रबार । इस्वी सन् २०२१ फेब्रुअरी १९ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर। उत्तरायण । शिशिर ऋतु । श्रीशाके १९४२ । माघ शुक्लपक्ष । तिथि–सप्तमी, ०६ घडी २६ पला, बिहान ०९ बजेर १५ मिनेट उप्रान्त अष्टमी। नक्षत्र–कृतिका, ४६ घडी ०६ पला, रातको ०४ बजेर १९ मिनेट उप्रान्त रोहिणी। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर ४० मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ५६ मिनेट । दिनमान २८ घडी ११ पला । अचला सप्तमी । प्रजातन्त्र दिवस ।
मेष : बोलीको प्रभाव बढ्ने हुँदा बोलीकै भरमा काम हुनेछन् । कार्यक्षेत्रमा तपाईंको निर्णयको उच्च कदर हुनेछ। आफन्त तथा परिवारका सदस्यहरु तपाईंको कामदेखि खुशी हुनेछन् । पारिवारिक माहोलमा सहभागी भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । माया प्रे’ममा सामी’प्यता बढेर जानेछ ।
वृष : परिवार तथा आफन्तजनमा आत्मीयताको भाव बढ्नेछ भने माया प्रे’ममा नजिक हुने समय रहेको छ। व्यापार विस्तार गरी भनेजस्तो लाभ लिन सकिने तथा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी आम्दानीका स्रोतहरु विस्तार गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा मनजाने हुनाले अन्य प्रतिस्पर्धीहरुलाई टप्न सकिने तथा सबैको धन्यवादको पात्र हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरुले राज्यबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बिहानको समयमा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
मिथुन : वैदेशिक व्यापार तथा वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामबाट न्यून आम्दानी हुनेछ । लामो दूरीको विदेश यात्राको तय नगर्नु नै राम्रो रहनेछ । विद्यामा भने सफलता पाउन निकै नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्यमा केही खराबी हुन सक्छ ख्याल गर्नुहोला । बिहानको समय राम्रो रहेकाले पै’त्रिक धन तथा सम्पत्तिको प्रयोग मार्फत् प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ । माया प्रे’ममा नजिक भई मनका भावना साटासाट गर्न सकिनेछ ।
कर्कट : आम्दानीको तुलनामा खर्च कम हुनेहुँदा फाइदा हुने क्षेत्र खोजेर लगानी गर्न सकिनेछ । व्यापार तथा सेयर बजारमा गरेको लगानी फस्टाएर जानेछ भने पैत्रिक धन सम्पत्ति परिचालनका माध्यमबाट मनग्य लाभ लिन सकिने छ । राज नीतिमा लाग्नेहरुले राज्यबाट विशेष सेवा सुविधा पाप्त गर्न सक्नेछन् । पढाइलेखाइ प्रगतिकै बाटोमा अगाडि बढाउन सकिनेछ भने वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामबाट प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ ।
सिंह : कानुनसम्मत गरिने कुनै पनि काम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुनेहुँदा मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ । नयाँ काम पाउने तथा व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने हुनाले आर्थिक रुपमा सुदृड होइनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरुले राज्यबाट पद प्रतिष्ठा पाउने योग रहेको छ । प्रे’म प्रसङ्गमा सा’मीप्यता बढेर जानेछ ।
कन्या : लगनशील तथा इमानदारिताले समाजका मानसम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ। प्रे’म प्रसङ्गको गाँठो कसिलो भएर जानेछ भने नयाँ ठाउँबाट प्रे’म प्रस्ताव आउने अधिक सम्भावना रहेको छ। लामो समयदेखि रोकिएर बसेका काम बन्नेछन् भने तपाईंको काममा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरु आफै किनारा लाग्नेछन् । पढाइलेखाइमा प्रशस्त समय दिन सकिने हुँदा भनेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ । नयाँ काम पाउन तथा नोकरीमा बढोत्तरीको गतिलो योग रहेको छ । बिहानको समय मध्यम रहेकाले आफन्त तथा दिदीबहिनीसँग मन मु’टाव बढ्नेछ । सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
तुला : नचाहँदा नचाहँदै नराम्रो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ भने अप्रिय घट्ना हुन सक्छ, ध्यान दिनुहोला । पढाइमा मन नजाने तथा अरुकै पोल्टोमा नतिजा पर्नेछ । प्रेममा धोका हुने तथा घरपरिवारमा आफन्तसँग सामान्य कुरामा नै ठूलो विवाद हुनेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्या आउने तथा बेवास्ता गर्दा ठूलो रोग लाग्न सक्छ, सचेत रहनुहोला । बिहानको समय राम्रो रहेकाले व्यापारमा लगानी गरी लाभ लिन सकिनेछ ।
वृश्चिक : टिम परिचालन गरी व्यावसाय विस्तार गर्न सकिनेछ भने व्यापारबाट मनग्य फाइदा हुने योग रहेको छ । भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको प्राप्तिको गतिलो योग रहेको छ । नोकरीमा सुगम स्थानमा स्थानान्तरण हुने छ भने भने जस्तो काम पाइने हुँदा मनग्य धन कमाउन सकिनेछ । जीवन साथीको सहयोगले महत्त्वपूर्ण काम समयमा सम्पादन हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ ।
धनु : व्यापार व्यावसाय फ’स्टाएर जानेछ भने थोरै मिहिनेतले प्रशस्त लाभ लिन सकिनेछ । वाद वि’वाद तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईंकै जित हुने तथा शत्रु परास्त हुनेछन् । न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईं कै पक्षमा हुनेछन् । प्रे’ममा सामीप्यता बढेर जानेछ । पुरानो रोग तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी स’मस्या हल भएर जानेछ । विद्यामा गरेको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल पाइने योग रहेको छ ।
मकर : बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने अन्य व्यावसायमा नाफा कमाउन केही समय पर्खनुपर्नेछ । बौद्धिक व्याक्तित्वहरु सामु तपाईंले प्रस्तुत गर्नुभएको खरो प्रस्तुतिले सबैको मन जित्नेछ । पढाइ लेखाइमा अरुभन्दा एक कदमअघि बढी नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । भौतिक तथा मानव निर्मित स्रोत साधनको प्राप्तिको योग रहेको छ । सन्तान तथा छोराछोरीको प्रगतिमा मन रमाउनेछ । माया प्रे’ममा सा’मीप्यता बढेर जानेछ। बिहानको समयमा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
कुम्भ : राजनीतिकर्मी तथा समाजसेवीहरुले जनताको जनताको काम गर्न सक्दा मात्र मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ । आमा तथा आमा सरहका मानिससँग टाढिएर देश परदेशको यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायलाई समय सापेक्ष आधुनिकीकरण गरी मनग्य लाथ लिन सकिनेछ । बिहानको समय राम्रो रहेकाले व्यापारमा लगानी गरी मनग्य धन आर्जन गर्न सकिनेछ । विद्यार्थीका लागि पढ्ने लेख्ने वातावरण बनेर आउनेछ ।
मीन : पुराना सम’स्यालाई केही समय दिएर सकाउन सकिने छ भने नयाँ नयाँ काम गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर मनग्य आम्दानी गर्न सकिने छ । व्यापार व्यावसाय फस्टा’एर जानेछ भने छोटो दूरीको व्यावसायिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । विद्यार्थीले आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरुलाई सजिलै हराउन सक्नेछन् भने पढाइ लेखाइमा भनेजस्तो नतिजा ल्याउन सकिनेछ । अदा’लती निर्णयहरु तपाईंकै पक्षमा आउने हुनाले मन प्रसन्न रहने छ । तपाईंको दिन शुभ रहोस् ।